HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirGawaarida Volkswagen waa loo dhaqaajin doonaa sidan oo kale
Gawaarida Volkswagen waa loo dhaqaajin doonaa sidan oo kale
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, tareenka, Gawaarida Tareenka, GUUD, Headline, TURKEY, gaadhi 0
Gawaarida Volkswagen ayaa loo sido sidan oo kale
Turkey tareenka iyo Engine Industry xaaqiijiyay (TULOMSAS), Rafaa Jarmal baabuurta Volkswagen in la soo saaray ee warshadda cusub oo la cayimayo in la aasaaso dalka Turkiga ayaa la filayaa in ay fuliyaan "laba dabaq baabuur" images noocooda, markii ugu horeysay ee HaberTürk ... Halkan Turkey, TULOMSAS ' sawirada laba gaari oo dabaq ah oo ay dhiseen injineerada Turkiga, farsamayaqaannada iyo shaqaalaha xarumaha Eskişehir.
Warka Olcay Aydilek ee ka socda Habertürk Guji
Metrobus wuxuu joogey waddada ... Metrobus wuxuu qaaday nolosha ... Metrobus sida tan, metrobus sida tan, waa maxay metrobus 30 / 07 / 2012 Down Metrobus, Metrobus taagay wadada ... ... qaaday Metrobus Metrobus Metrobus awoodo ... tidhaahdaan, shaqo Metrobus Metrobus sidan oo kale ... Waa maxay waxani? Sahi oo magacan u bixiyey baska dheer? Waxaan doonayay inaan maanta qoro sheekada magaca in ... waxaan maqlay inta badan sanadihii la soo dhaafay, inkastoo aan si qalad lacagta Metrobus ah, haddii aad rabto in aad ogaato sheekada magaca ku dhacaa ka mid ah luqada, Waxaan u maleeyay. *** Anigoo ku hadlaya magaca block pop-up, in uu leeyahay pages on Facebook, Limoni tilmaamay noocyada kala duwan ee sheekooyinka ee qaamuuska, abuuritaanka khiyaali Inside, aad iyo aad maalin ku dhawaad ​​ciyaarta, Metrobus ... *** Istanbul degmada Metropolitan si loo fududeeyo gaadiidka, dadka raqiis ah iyo in la hubiyo safarka in raaxada Xagee ayuu magaca metrobosku uga yimaadaa?
OMSAN ayaa gawaarida wadata 25 / 12 / 2013 OMSAN Gawaarida Gaadiidka Tareenka: OMSAN waxay adeegsadeen baabuurta xamuulka ah si loogu isticmaalo gaadiidka baabuurta ee Roomaaniya. Shirkadda hoggaamineed Turkey ee logistics baabuurta OMSAN, ayaa ku daray mid cusub in dhaqanka ay bay'adda u fiican oo tartan rasmi ah. OMSAN, oo magaceeda u sameeysay wacyigelin heer sare ah iyo farsamooyin tartan ah, ayaa u xilsaaray gaadiidka gaadiidka ee baabuurta si loogu isticmaalo gaadiidka baabuurta ee Piteşti iyo dekedaha Constanta ee Roomaaniya. Gawaarida ayaa sidoo kale noqon doona tiirarka tareenka ee gaadiidka gaadiidka ee isku dhafka ah ee u dhexeeya Piteşti / Romania iyo Orhanlı / Istanbul. Kürşad ÜNLÜ, Maamulaha Gaadiidka Gaarka ah ee OMSAN, ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan inay bixiyaan xeeladaha saadka ah ee abuura qiimaha deegaanka iyo macaamiisheeda.
Nasiib-wanaagga iyo Gawaarida Dunida ugu Caansan ayaa ku kulmay Quail 21 / 08 / 2019 Quail, 17, ayaa lagu muujiyey inuu yahay mid ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan ee motorsport adduunka. jeer waxaa qoray Hoteelka Peninsula. James Masden, Mark Webber, Hannah Bronfman iyo Brendan Fallis ayaa ka soo qeybgalay munaasabadda, kuwaas oo soo bandhigayey aruurinta ugu badan uguna dhifsan adduunka. Waxaa qoray Peninsula Hotels 17. jeer lagu qabtay dhacdada Quail ee Carmel Valley California. Keenista ciyaaraha jimicsiga gawaarida iyo kuwa gawaarida xiisaha leh ee adduunka, munaasabadda ayaa leh qaababka dhif iyo naadir ee aan la ilaawi karin.
Rakaabka 419 ayaa lagu dhex wadi doonaa hal mar oo ah Ankara-Istanbul YHT 27 / 07 / 2014 Rakaabka 419 ayaa mar kaliya lagu sii wadi doonaa line-yada Ankara-Istanbul YHT: Rakaabka 40 ayaa u gudbi doona Ankara iyo Istanbul seddex saacadood iyo 419 daqiiqado. Waxaa jiri doona afar qaybood oo kala duwan oo tikidhada ah oo loogu talagalay tareenada lixda ah. Tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul wuxuu furay Ankara iyo Istanbul mudo ah saddex saacadood 40. Ankara-Eskisehir qaybta 533 ee xarumaha Ankara-Istanbul YHT ee 245 kilomitir ayaa loo adeegsaday 2009. Waxaa jiri doona 9 degmo oo Polatli, Eskisehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze iyo Pendik. Marxaladda koowaad, joogsiga ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa Pendik, ka dibna saldhigga ayaa noqon doona koofiyad
Mashruuca YHT Ankara-Izmir ayaa la qorsheeyay in uu sanadkiiba mar qaado rakaabka 6 13 / 06 / 2012 Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) Eskisehir, Konya, ka dibna wuxuu u wareegay jidka İzmir. Marka mashruuca la xaqiijiyo, 8-10 inta u dhaxaysa laba magaalo ayaa hoos u dhigi doonta 3 illaa hal saac iyo badh. Talaabada ugu horeysa waxaa loo qaaday YHT inta u dhexeysa İzmir iyo Ankara. Gundhigga marxaladda koowaad ee xariiqda, Ankara-Afyonkarahisar, ayaa lagu soo gabagabeeyay. Heshiiska dhismaha ee khadka ayaa sidoo kale la saxiixay. Inkasta oo shaqooyinka marxaladda labaad ee mashruuca ay socdaan, dhismaha xariiqa waxaa loola jeedaa in la buuxiyo sida ugu dhakhsaha badan. Marxaladaha Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar iyo Uşak, Manisa iyo Izmir-Usak ay ka mid yihiin marxaladaha ka kooban oo ka mid ah sano Project YHT Ankara-Izmir, 3 6 milyan oo rakaab qaadeen YHT jadwalka. Waqtiga safarka ee u dhexeeya Ankara iyo Izmir wadarta dhererka 624 kilomitir waa saacadda 3
MESİAD: 'Nidaamka Tareenka Fudud waa in la dhisaa Meel laga dhisi doono mitirka Mersin'
Tareenka Eurasia ee 2021 Markii Ugu Horaysay ee Konya
Metrobus wuxuu joogey waddada ... Metrobus wuxuu qaaday nolosha ... Metrobus sida tan, metrobus sida tan, waa maxay metrobus
OMSAN ayaa gawaarida wadata
Nasiib-wanaagga iyo Gawaarida Dunida ugu Caansan ayaa ku kulmay Quail
Rakaabka 419 ayaa lagu dhex wadi doonaa hal mar oo ah Ankara-Istanbul YHT
Mashruuca YHT Ankara-Izmir ayaa la qorsheeyay in uu sanadkiiba mar qaado rakaabka 6
Tiknooloojiyada baska ee shiinaha oo ka yimid Shiinaha, 1200 ayaa qaadi doonta rakaab (Video)
Ford Cargo oo loo Qoondeeyay Iskaashatada Turkish-Ruushka (Sawir Sawir)
Carruurta ku jirta Kecioren waxaa lagu sii wadi doonaa iskuulka baabuurta fiilada
Mashruuca Xarunta Tababarka Adapazarı ayaa la casriyeyn doonaa ka hor inta aan la bilaabin duullimaadka
TÜVASAŞ Sida Movable (Video)